Creative Writing » N+ 110715 ရန်ကုန်မြို့ကားဂျမ်း	28
မန်းဂေဇက်ရွာထဲမှာစရေးခဲ့တဲ့ပိုစ့်ကတော့ ဘုရင့်နောင်ကားဂျမ်းအကြံပေးပါဆိုတဲ့ပို့စ်ကလေးပါပဲ။ အခုတော့ ရန်ကုန်တမြို့လုံးပဲကားဂျမ်းဖြစ်ကုန်ပါပြီ။ အရီးလတ်ရဲ့တာဝန်ပေးချက်အရ စဉ်းစားလို့ရသလောက် ဥာဏ်မှီသလောက်ရေးလိုက်ပါတယ်။ ဘုရင့်နောင်ကားဂျမ်းဆိုတာက ဆန် ကြက်သွန်အာလူး ကုန်ခြောက် ငါးခြောက်တွေရောင်းတဲ့ တနိင်ငံလုံးကိုဖြန့်တဲ့ အဓိကဒိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကားအ၀င်အထွက်များပါတယ်။ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာနှင့်အမျှ ကားအ၀င်အထွက်များလာပါတယ်။ ၁၂ဘီးကားလို ကားအရှည်တွေပါဝင်လာပါတယ်။ ဘုရင့်နောင်တံတားက အဓိက အလုပ်အသွားအပြန်အတွက် ရုံးသွားရုံးပြန်အတွက်အဓိကဖြစ်ပြီး အင်းစိန် ရွှေပြည်သာတံတားတွေက ကုန်စည်စီးဆင်းမှုအတွက်အဓိကကျပါတယ်။ ကျနော့်အမြင်ဘုရင့်နောင်ကားဂျမ်းရဲ့အဓိကအချက်က အာဆီယံစံဆိုပြီးကုန်တင်ကားတွေ ကုန်ကိုတ၀က်လောက်လျှော့ထင်ဖို့အမိန့်ထုတ်တာက အရင်ထဲကဂျမ်းဖြစ်ချင်နေတာကို ရှင်းမရအောင် ဖြစ်စေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ကားအရေအတွက်များလွန်းရင် ဂျမ်းဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာကတော့ငြင်းမရတဲ့အချက်ပါ။ မြို့ထဲလိုနေရာမျိုးမှာ ဈေးကလည်းကောင်းတော့ အထပ်မြင့်တွေဆောက်လာကြပြီး တဖြေးဖြေးနဲ့ လူဦးရေထူထပ်လာပါတယ်။ ယခုခေတ်ကားဈေးကလည်း လူအတော်များများ ၀ယ်စီးနိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်တော့ တချို့နေရာတွေဆို တအိမ်ကို ၂စီးထက်မကရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဆောက်တဲ့တိုက်တချို့ကလည်း ကားပါကင်တွေမပါတော့ လမ်းပေါ်ရပ်ကြရပါတယ်။ ကားပါကင်တွေပါရင်တောင်မှ ညဘက်အိပ်ချိန် လမ်းပေါ်မှာရှင်းနိုင်ပြီး နံနက်အလုပ် ကျောင်းသွားချိန်လမ်းပေါ်မှာစုပြုံပြီးဂျမ်းဖြစ်လာစေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မြို့ထဲမှာ အထပ်မြင့်တွေထပ်ဆောက်ခွင့်ကိုစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ဆောက်လက်စတွေကို တခန်းကို ကားပါကင် ၂စီးနှုန်းထည့်ဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ် ။ ကားပါကင်မပါရင်ဒဏ်ငွေထိထိရောက်ရောက်ချပါ။ နိုင်ငံခြားမှာဆောက်တဲ့ကွန်ဒိုအများစုဟာ ရှိတဲ့မြေရဲ့ ၅၀% လောက်ကိုသာအဆောက်အဦးဆောက်ပြီး ကျန်၅၀%လောက်ကို အလှဆင်ခြင်းနှင့် ကားပါကင်အတွက်အသုံးပြုတတ်ကြပါတယ်။ လိုအပ်လာရင် အလှဆင်ထားတဲ့မြေကိုပါ ကားပါကင်အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာက ရှိတဲ့မြေကို အပြည့် သို့မဟုတ် ၅ပေလောက်ပဲချန်ဆောက်ကြပါတယ်။ မြေကြီးဈေးကလည်းကောင်းတော့ စီးပွားရေးတွက်ခြေကိုက်ဖို့ အခန်းများများရဖို့ အဓိကထားကြပါတယ်။ အခုအခါပန်းခြံ အားကစားကွင်း တချို့ကိုလည်း ကွန်ဒိုတွေဆောက်မယ်လို့ကြားသိရပါတယ်။ ပန်ခြံအားကစားကွင်းလို space တွေက နောင်တချိန်အရေးပေါ်လိုအပ်ရင်သုံးဖို့ safety factor အနေနဲ့ထားသင့်ပါတယ်။ ဥပမာ ကားပါကင်လိုမျိုး မြို့လည်ခေါင်ကနေ ကားဂျမ်းဖောက်ထွက်ဖို့ စင်္ကာပူလို မြေအောက်ရထားလမ်း ကားလမ်းတွေ ကိုလိုအပ်ရင်ဖောက်ဖို့အတွက်ပါ။ မြေအောက်ရထားလမ်းတွေကလည်း စင်္ကာပူလိုမီးလင်းအောင်ထွန်းပြီး ကင်မရာနဲ့မစောင့်ကြည့်နိုင်ရင် ဒုစရိုက်မှုတွေလည်းဖြစ်လာနိင်ပါတယ်။ စရိပ်ကြီးတဲ့အတွက် အရှုံးတော့များနိုင်ပါတယ်။ မြေအောက်ကဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်လိုတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းဖောက်နိင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်းအဖျက်သမားများက အလွယ်တကူဖျက်ဆီးနိင်လို့သတိထားရပါမယ်။
စင်္ကပူလို MRT အသုံးများတဲ့နိုင်ငံမှာတောင်မှ Orchard လိုမြို့လယ်ခေါင်မှာ Peak hour ဆိုကားဂျမ်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ကားဂျမ်းရှင်းဖို့အတွက်ရထားလမ်းကလည်းလိုအပ်ချက်တခုဖြစ်ပါတယ်။ ကားလမ်းနဲ့ရထားလမ်းတွေကို အဆင်ပြေပြေချိတ်ဆက်ထားဖို့လိုပါတယ်။ ယခုလက်ရှိဘူတာရုံတွေက ကျဉ်းလို့ကားလမ်းနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့အခက်အခဲရှိနိုင်လို့ ဘူတာတွေကိုလည်းကျယ်တဲ့နေရာတွေကိုရွှေ့ဖို့လိုရင်လည်းရွှေ့ရပါမယ်။ ယာဉ်လိုင်းတွေကလည်းလမ်းကြောရှည်လွန်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ရေလမ်းကိုပါအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အခုမီးပွိုင့်တွေကိုတခုနဲ့တခုချိတ်ဆက်ထားတာကလည်း ကားဂျမ်းဂိမ်းထဲမှာကစားသလို ကားဂျမ်းကိုသက်သာစေပါတယ်။ မြို့လယ်ခေါင်လို လမ်းချဲ့ရတာအကန့်အသတ်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာ ကားဂျမ်း ပိုမဆိုးလာအောင် အထပ်မြင့်အဆောက်အဦးတွေကိုကန့်သတ်သင့်ပါတယ်။ လမ်းကျဉ်းတယ်ဆိုတာကတော့ flow rate နဲတဲ့သဘောပါပဲ။ flow rate ကိုတတ်နိုင်သလောက် ချဲ့ပေးဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ သဘောကတော့ ယာဉ် ၂ထပ် ၃ ထပ်ကွေ့တာတွေ ကို ပညာပေးပြီးခွင့်ပြုသင့်ပါတယ်။ ၂ထပ်ကွေ့တဲ့ယာဉ်ဟာ ကိုယ်ကာကွေ့တဲ့ကားရဲ့ဦးခေါင်းကို ကျော်ရင်ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ ကိုယ်ကာကွေ့တဲ့ယာဉ် ရပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ ၂ထပ်ကွေ့တဲ့ယာဉ်လိုက်ရပ်ဖို့ ပညာပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
အများဆုံးဂျမ်းဖြစ်တတ်တာကတော့ကွေ့လိုင်းက ယာဉ်တွေပါ။ တချို့မီးပွိုင်ဆိုရင်ကွေ့ဝင်ရတာတော်တော်ခက်ပါတယ် မီးစိမ်းနေရင် အတည့်လာသည့်ကားတွေက ဆက်တိုက်မို့ကွေ့လို့မရ။ ကွေ့လိုင်းအတွက်အချိန်ပေးတယ်ဆိုသော်လည်း တချို့မီးပွိုင့်တွေမှာ အချိန်နဲလွန်းပါတယ်။ မီးပွိုင့်နီနေစဉ် ကန့်လန့်ဖြတ်ယာဉ်ကြောက သွားမည့်ကားမရှိရင်လည်းကွေ့လို့မရ။ ဒါကြောင့်မီးနီကိုမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် လုပ်ထားပြီး ကန့်လန့်ဖြတ် သွားမည့်ကားမရှိရင်မောင်းခွင့်ပေးရင် လဲ ကားဂျမ်းကိုသက်သာစေပါတယ်။ ဒါကသမရိုးကျလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့ဆိုရင်ခွင့်ပြုဖို့ခက်ပါလိမ့်မယ်။ တခါတရံရှေ့မှာကားတစီးလောက် block ဖြစ်နေရင်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ block ဖြစ်တတ်တာကတော့လမ်းလေးခွဆုံက cross box တွေမှာကားလမ်းလုရင်းဖြစ်တာနဲ့ ကွေ့ဖို့စောင့်နေတဲ့ ကားကရပ်ထားလို့နောက်ကားကသွားမရပဲ စောင့်နေရင်းblock ဖြစ်တာမျိုးပါ။ ကားဂျမ်းသက်သာဖို့အတွက် continuous flow လမ်းကြောင်းတကြောင်းလိုပါတယ်။ လမ်းလယ်ဘက်ယာဉ်ကြောက ကွေ့မည့်ကားရပ်စောင့်နေလို့ ဂျမ်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အလယ်လမ်းကြောင်းကတော့အနှောက်အယှက်မရှိ အတည့် flow သွားနိုင်ရပါမယ်။ ဘေးလမ်းကြောင်းကတော့ ကားရပ်ဖို့အတွက်စသည်ဖြင့်အနဲဆုံးယာဉ်ကြော ၃ကြောလောက် လို ပါမယ်။ ဥပမာ -ဘုရင့်နောင်
တလမ်းမောင်းသတ်မှတ်ခြင်းဟာလည်း လိုရာသွားဖို့ ကွေ့ပတ်သွားလာနေ၇တဲ့အတွက် လမ်းကြောရှည်ပြီး လမ်းရဲ့ဖြတ်သွားရမည်း joint ပိုများလာရင် ကားဂျမ်းဖြစ်နိုင်ခြေပိုများပါတယ်။ လမ်းလယ်တုံးတွေဟာလည်းသုံးတတ်ရင်ကားဂျမ်းကိုသက်သာစေပြီး မသုံးတတ်ရင်ကားဂျမ်းကိုပိုဆိုးစေပါတယ်။အာရှတော်ဝင်ဆေးရုံရှေ့လို နေရာမှာကွေ့မရအောင် လမ်းလယ်တုံးတွေချထားတာကားဂျမ်းကိုသက်သာစေပေမဲ့ အတည့်သွားမည့်ယာဉ်ကြောတွေမှာ ချထားတဲ့လမ်းလယ်တုံးတွေဟာကားဂျမ်းကိုပိုဆိုးစေပါတယ်။
လိုင်းကားယာဉ်လိုင်းတွေကိုတုံးချတာတွေကမလုပ်သင့်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ကားဂျမ်းကို လိုင်းကားသမားတွေစည်းကမ်းမဲ့လို့ဆိုပြီးအပြစ်ပုံချမယ်ဆိုရင်လိုင်းကားမထွက်ရင်ကော ဒီကားဂျမ်းကရှင်းသွားမှာလားလို့မေးချင်ပါတယ်။ လမ်းတွေထဲကထွက်ရင်လည်း တုံးတွေကြောင့်အင်မတန်ခက်ပါတယ်။ လိုင်းကားသမားများဟာ ကားဂျမ်းဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ရုန်းထွက်ဖို့ အလောတကြီးကြိုးစားကြရပါတယ်။ ကားဂျမ်းကြောင့် လိုင်းကားသမားတွေရဲ့ စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လိုင်းကားသမားတွေရဲ့ဘ၀ နားလည်စာနာပေးစေချင်ပါတယ်။ ဗဟိုလမ်းနဲ့ BPI ရထားလမ်းကျော်မီးပွိုင့်မှာဆိုရင် ရထားလမ်းဖွင့်တဲ့အချိန်မှာ ကြို့ကုန်းဘက်က အတည့်ဆင်းလာတဲ့ကားတွေကိုဗဟိုလမ်းဘယ်ဘက်ကွေ့မည့်ကားကစောင့်နေရပါတယ်။ ရှေ့ကကွေ့မည့်ကားက ရပ်ထားတော့ နောက်က ကားတန်းကပါရပ်ကုန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီမီးပွိုင့်မှာ BPI ဘက်ကရထားလမ်းကျော်လာတဲ့ကားတွေကို ဗဟိုလမ်းဘက် ဘယ်ဘက်ကွေ့ခွင့်ကိုပိတ်လိုက်ရင် flow ပိုမိုကောင်းမွန်စေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ရထားလမ်းဖွင့်ချိန်နဲ့မီးပွိုင့် timing ကိုလည်းညှိပေးဖို့လိုပါမယ်။
ကားတစီးရဲ့တန်ဘိုးဟာ လမ်းအပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။လမ်းကောင်းကောင်းရှိနေရင်ကားကအင်မတန်အသုံးဝင်ပါတယ်။ လမ်းမရှိရင်တော့ကားတစီးက သုံးမရတဲ့သိမ်းထားရတဲ့အမှိုက်သဘောလောက်ပါပဲ။ ဒါကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းလက်ထက်က ဘတ်ဂျက်မရှိလို့လမ်းမချဲ့နိုင်တဲ့အတွက် ကားတင်သွင်းမှုတွေကိုထိမ်းချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုထိမ်းချုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် ကားတွေကစီးရုံသာမက ကစားတဲ့ဈေးကွက်တခုအနေနဲ့တဖြေးဖြေးနဲ့ကားဈေးတွေမတန်တဆတက်လာပါတယ်။ ၀ယ်တဲ့သူတိုင်းအကျိုးအမြတ်များစွာရကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ကားနံပါတ်အက္ခတခုပြောင်းဖို့၂နှစ် ၃နှစ်လောက်အထိကြာတတ်ပါတယ်။အခုတော့တနှစ်ထဲမှာတောင်အက္ခရာ ဘယ်နှစ်ခုပြောင်းလဲမသိတော့ပါ။ အခုအချိန်မှာကားသွင်းရင်ပါကင်နေရာပြနိုင်မှကားသွင်းခွင့်ပေးတယ်လို့ကြားရပါတယ်။ ဒါကတော့ ကားအစီးရေသိပ်မတိုးလာအောင်ထိမ်းချုပ်တဲ့သဘောပါပဲ။ ဒီထိမ်းချုပ်မှုရဲ့အောင်မြင်မှုဟာလည်း အကန့်အသတ်ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ ကားအစီးရေကိုလိုသလောက်ပဲသွင်းဖို့ ထိမ်းချုပ်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ပါစပ်နဲ့ပြောရင်တော့ အကောင်အထည်ပေါ်နိုင်မှာမဟုတ်လို့ စင်္ကာပူလို ပေါ်လစီနဲ့ထိမ်းချုပ်တာမျိုးပါ။ ကားရပ်နားခွန်တွေကောက်တာရပ်လိုက်ပါ။ ရပ်နားခွန်ဆိုတာ လာရပ်တဲ့ကားပေါ်မှာသာကောက်လို့ရတာပါ။ အိမ်မှာအပိုဝယ်ထားတဲ့ကားတွေပေါ်မှာကောက်လို့မရပါ။ ကားရပ်နားခွန်တွေကို ကားတွေလိုင်စင်ဝင်ကတည်းက တစ်စီး ကို တလ ၃၀၀၀၀ကျပ်နှုန်းဖြင့်ကောက်ပါ။ ကားရှိတဲ့သူတိုင်းဟာ ဂိုထောင်ထဲမှာထည့်ထားသော်လည်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကားအပိုဝယ်ထားသူတွေအတွက် ၀န်ထုတ်ဝန်ပိုးဖြစ်လာနိုင်သဖြင့် ကားတင်သွင်းမှု လျှော့နည်းသွားမည်ဟုယူဆရပါတယ်။ စည်ပင်လမ်းပေါ်တွင်လည်း ညအိပ်ခွန်ကို တစ်စီး ၄၅၀၀၀ကျပ်လောက်ကောက်ပါ။ ကားဂိုဒေါင်ညအိပ်ကားပါကင်ရှိသူတွေပြနိုင်သူတွေကိုတော့ ကောက်စရာမလိုပါ။ ည အိပ်ခွန်အကျုံးဝင်ချိန်ကတော့ ည ၁၁ နာရီက နံနက် ၄နာရီ အတွင်းသတ်မှတ်ပြီး ရ၀တ နဲ့ပေါင်းပြီးညဘက်စစ်ဆေးပါ။ ဒါကတော့ ကားအပိုဝယ်ထားသူတွေကို အပိုမ၀ယ်ထားဖို့ ဖိအားပေးတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကားအစီးရေကိုလျှော့ချတဲ့နည်းတခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းဟာ နိုင်ငံဘဏာငွေကိုလည်း တိုးတက်စေပြီးကားအစီးရေကိုလည်း လျှော့ချနိုင်တဲ့အတွက် ၂ ကျပ်ကွက်ပါပဲ။ နိုင်ငံအတွက်လည်း လစဉ်ဘဏာငွေတိုးတက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခွန်ကောက်ပြီးတာနဲ့ကျန်တာကတော့ လုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန်တွေပါ။ ဒါကတော့ မရပ်ရဆိုတဲ့နေရာအတော်များများကို ကားရပ်နားခွင့်ပေးဖို့ပါပဲ။ ကားတွေတင်သွင်းခွင့်ပေးပြီဆိုတာနဲ့ ရပ်နားဖို့နေရာလည်းအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဥပမာ သံဈေးလိုနေရာမျိုးနံနက်ဈေးဝယ်ချိန်ကား၂ထပ်ရပ်တာကိုခွင့်ပြုသင့်ပါတယ်။ (၂ထပ်ရပ်သွားတဲ့ကားဟာ အရေးပေါ်ခေါ်ဆိုနိုင်မည့်ဖုံးနံပါတ်တွေကို ကား desh board ပေါ်မှာစာရွက်တရွက်နဲ့ရေးထားပေးခဲ့သင့်ပါတယ်။ )ဒါပေမဲ့ယာဉ်ကြောမပိတ်အောင် free way တလိုင်းသွားလို့ရအောင် ယာဉ်ထိမ်းရဲနှင့်ရှင်းလင်းပေးသင့်ပါတယ်။ KBZ ဘဏ်ရှေ့လိုနေရာမျိုးမှာငွေသွင်းငွေထုတ်ချိန်မှာ ယာဉ်၂ထပ်ရပ်တာမျိုးကိုခွင့်ပြုပြီးယာဉ်ထိမ်းရဲနဲ့ရှင်းလင်းပေးသင့်ပါတယ်။ N+ 300812 ကျွန်ုပ် သူကြီးနှင့်လူ့အခွင့်အရေးဘယ်သူဖောက်သလဲ?
@QUIL@ says: ကားရပ်တာ ကားညသိပ်တာ ကနေစပြီး ပြောပါ့မယ်ဗျာ..
မရိုးအောင် ကြားရ အော်ကြ ဟစ်ကြ ဆဲကြ ဆိုကြ ပေါ့…။ ယာဉ် ညအိပ် ရပ်နားစခန်းတွေ လိုအပ်ချက် မြင့်မားသထက် မြင့်မားလာတာက မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲ။
Alinsett @ Maung Thura says: 93လမ်းထဲမယ် ဝင်မိပြီး ပြန်ထွက် မရတော့လို့ ည သန်းခေါင်းကြီးမှာ ပိတ်မိဖူးပါကြောင်းးး
Ma Ma says: Yekkha Ye Jee with နဝရတ်စံအိမ် ကုမ္ပဏီ and 92 others
nature says: မြွေကတောဘွတ်ကိုဖောက်ကိုက်တယ်ဆိုတာတကယ်ရောဟုတ်ရဲ့လား fb မှာပေါက်ကရလျှောက်ရေးပြီးနောက်တတ်တဲ့သူတွေကလည်းခပ်များများ…။ တိုင်းရင်းဆေးမှာလည်းမြွေဆိပ်နိုင်တာတွေရှိပါတယ်။ ဒါတွေကိုအစိုးရက အသိအမှတ်ပြု အသုံးချသွားရင်အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ တလောကမြွေကိုက်လို့ ကျောက်ကပ်ပျက်ပြီး ဆေးရုံမှာသေဖို့ထိုင်စောင့်နေရတဲ့လူကို ဆေးမြီးတိုနဲ့ပျောက်သွားတာလက်တွေ့ပါ။
kai says: ပထမ… မြန်မာပြည်..ရန်ကုန်က.. ကားမများပါဘူးဗျ..။
nature says: ….တလောကတင်အရီးလတ်ပြတယ်မဟုတ်လား..
မြစပဲရိုး says: အတော်လေးချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ တို့ အမျိုး ဘဲ။ (အစ်ကိုဖြစ်မလား၊ မောင် ဖြစ်မလား မသိ)
nature says: ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပေါ်လစီက အလုပ်သမား လယ်သမားလူတန်းစားပေါ်တွင် အခြေခံသည်ဆိုတော့ အလုပ်သမားလယ်သမားတွေပဲဦးစားပေးအခွင့်အရေးပေးပြီးတော့ အလုပ်သမားလူတန်းစားတွေပဲပေါတာမဆန်းပါဘူး။ ကိုယ့်ဆီလာတဲ့အလုပ်ရှင်တွေကိုလည်းမောင်းထုတ် အလုပ်ရှင်မရှိတော့လည်း နိုင်ငံခြားထွက်အလုပ်လုပ်ကြတာပေါ့။ တန်တန်ရာရာအလုပ်မရတော့လည်းနောက်ဆုံးအိမ်ဖော်လုပ်ကြတာပေါ့။ လမ်းဘေးဈေးသည်တွေကတော့ တိုးပွားဖို့ပဲရှိတယ်။ တချို့လမ်းဘေးဈေးသည်တွေဆိုတော်တော်အဆင်ပြေပုံရတယ်။ တချို့တော့လည်းသိပ်အဆင်ပြေပုံမရဘူး။ အလုပ်မရှိလို့ဝင်ငွေမရှိတာထက်စာရင်တော့ တော်သေးတာပေါ့။
စိန်ပလိန်တိန် မုန့်ကြိုးလိမ် says: ကျွန်တော်က ဘုရင့်နောင်ဈေးနားနေတော့… အဲ့က ကားပိတ်ချက်ကို ပိုးစိုးပက်စက်ခံခဲ့ရသူပါ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: သိပ်နားမလည်လို့ ဝင်မပြောပေမဲ့ ဖတ်သွားပါတယ် ဗျို့။
ဦးကြောင်ကြီး says: ယံကုန်ကို နယ်အစုံက လာပြီး အခြေချမှုက အဓိက အချက်ပါ။ ဒါတောင် ဆတ်မှုဇုံတွေ မြို့ပြင် ခွဲနိုင်ဂဲ့လို့နော်…။ နိုင်ငံအဝှန်း ထုတ်လှုပ်ရေး၊ ကူးသန်းယောင်းဝယ်ရေး စသဖြင့် ဇုံမြို့ ဂျီးတွေ မတည်ဆောက်နိုင်သ၍ စက်ဖြစ်နေပါအူးမည်။
မြစပဲရိုး says: . မောင်မောင်ကြောင် ပြောတာ ကို ဆက်ကြည့်ရရင်
Mike says: .တစ်ချက်ပြောချင်တာက မီးပွိုင့်ရှိပေမဲ့ ယာဉ်ထိန်းရဲတစ်ယောက်စီထားသင့်တယ်…
nature says: မီးပွိုင့်တိုင်းယာဉ်ထိန်းထားနိုင်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးထင်တယ်။ ကားဂျမ်းဖြစ်တတ်တဲ့အချိန် နေရာလောက်သိထားပြီးထားရင်တောင်မဆိုးပါဘူး။ လမ်း ၄ခွဆုံမှာခေါင်းလုတာကတော့ အချို့ဆို လမ်းကြောင်းချန်ထားပေးတတ်လာပေမဲ့ အများစုကတော့ ပိတ်ရပ်တုန်းပဲ။
kai says: မီးပွိုင့်ရှိပေမဲ့ ယာဉ်ထိန်းရဲတစ်ယောက်စီထားသင့်တယ်…
တောင်ပေါ်သား says: ကားလမ်း မပိတ်စေဖို့ ယာဉ်မရပ်ရ ဖြူနီကျားလုပ်တယ် ၊ ရပ်တာပဲ ၊ တကယ်သာဖမ်းရင် ဘယ်အကောင်မှ မရပ်ရဲဘူး ၊
လှည်းတန်းဘက် ညနေ လမ်းလျှောက်ကြည့် ၊ ပလက်ဖောင်းကို အပိုင်စီးထားတာက ဈေးသည် ၊ လူတွေက လမ်းပေါ်ရောက် ၊ ကားတွေက ၃ စီးစာမှာ ၂ စီးပဲ သွားနိူင်တော့တယ် ၊
ဆင်ရေတွင်းကနေ သုခထိပ်အထိ ဘာလို့ပိတ်သလဲ ? ၃ လမ်းသွားမှာ ညာဘက်ဆုံးလမ်းက ညအိပ်ကား နဲ့ ဆိုက်ကားတွေက နေရာယူထားတာလေ ၊
ဥပဒေဆိုတာ ထုတ်ထားရင် တကယ်အရေးယူပေါ့ ၊ ခုတော့ ဒုံရင်းပဲ ၊ အသုံးမကျတဲ့ ကားတင်သွင်းခွင့်မှာ ကားပါကင်ရှိကြောင်းပြရမယ်ဆိုတာကြောင့်
ပြောတဲ့သူသာ မောပြီးအသက်ထွက်မယ် ၊ တကယ်အရေးမယူသရွေ့ ဘာမှဖြစ်လာမှာ မဟုတ် ၊ အမယ်လေး မောတာ ၊ ရေတစ်ခွက်လောက်
အောင် မိုးသူ says: နေ့တိုင်းတွေ့ကြုံခံစားနေရတာပါ အလုပ်ကအသွားအပြန် လိုင်းကားပေါ်မှာ အချိန်ကုန်တဲ့ဘဝ ဘယ်အချိန်လွတ်မလဲမသိ။
မွသဲ ( 17082011 ) says: ကျန်တာတော့မသိ လူကတော့ တနေ့တနေ့ကားပေါ်မှာပဲအိုအိုသွားပါကြောင်း Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 672
YE YINT HLAING says: ပြောသွားကြတာလည်း အစုံပါပဲ။
nature says: အမေရိကန်က တချို့ပြည်နယ်တွေမှာ ညာဘက်ကွေ့မည့်ကားဟာ မီးနီနေသော်လည်း ကားရှင်းရင်ကွေ့ခွင့် ပေးတာတွေ့ရတယ်။
kai says: In some states, such as New York and California,aright turn on red is prohibited whenared arrow is displayed.
အမေရိကန်က.. ကားမောင်းနေတဲ့အမေရိကားတွေ.. မီးနီညာဖက်ကွေ့မောင်းလို့ရတယ်လို့သာ မှတ်စေလို..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: အမေရိကန်နဲ့ အမေရိက ကို မြန်မာလိုပဲ အသံထွက်ပြီး အမှတ်တမဲ့နဲ့ ရေးနေပြောနေကြတာမို့ အမှားကို မှားမှန်းမသိအောင် နားယဉ်နေပြီ။
အင်္ဂလန်နဲ့ အင်္ဂလိပ်ကို မှားရေးရင်သာ နားထဲမှာ ကန့်လန့်ကြီးဖြစ်ပြီး မှားမှန်းသိတာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14461
kai says: United States of America ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလို့ ဘာသာပြန်ရေးလိုက်တဲ့သူတွေစလိုက်တဲ့ပြသနာလို့ထင်မိတယ်..။
ထေရာဝါဒသမားတွေ.. အတုယူစေလို..။ Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: News :: 22/08/15
A humble wave fromahero: Wounded US airman who took down AK47-wielding terrorist on French train, then treated others before tending to his own stab wounds emerges from hospital withasmile One of the Comments
Americans are called “Yanks” in here. Was this answer helpful?LikeDislike 14461
kai says: Yanks (1979) – IMDb
nature says: အမေရိကန်မှာ လမ်ဘေးတွေမှာယာဉ်ရပ်ခွင့်မရှိဘူး။ အိမ်တွေ Super Market တွေကလည်း ရပ်ဖို့ ကားပါကင်လုံလုံလောက်လောက်လုပ်ပေးထားတော့ အဆင်ပြေတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ရပ်ဖို့ကားပါကင်ကလည်းမရှိ။ လမ်းဘေးလည်းမရပ်ရဆိုတော့ ….
kai says: အမေရိကားက.. ယူတားပြည်နယ်မှာ မိုမွန်အမေရိကန်တွေမိန်းမ တယောက်ထက်ပိုယူလို့ရတယ်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: သဂျီးကတော့ တကယ့်ချက်ကောင်းကို ရှာတတ် သိတတ်တာပဲ။
ယူတားပြောင်းနေဖို့များ စိတ်ကူးနေလား မသိဘူး။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.